Toeram-panarenana LPG 1~6 mmscfd namboarina avy amin'ny orinasa sinoa
Nahoana no hamerenana ny ranon-tsolika voajanahary: Manatsara ny kalitaon'ny entona voajanahary, mampihena ny ando hydrocarbon ary misoroka ny fihanaky ny hydrocarbon amin'ny fitaterana fantsona; Ny vokatra azo avy amin'ny condensate dia solika sivily manan-danja sy solika simika; Ny tahan'ny fampiasana feno ny loharanon-karena dia omena, izay manana tombony ara-toekarena tsara.
Ny entona voajanahary ivelan'ny fetran'ny bateria dia voatsindry voalohany amin'ny 1.6Mpa amin'ny alàlan'ny compressor, avy eo mafana amin'ny 380 ℃ amin'ny alàlan'ny preheater entona fahana ao amin'ny fizarana convection amin'ny fanavaozana etona, ary miditra amin'ny desulfurizer mba hanesorana ny solifara ao amin'ny entona fahana etsy ambany. 0.1ppm.
Mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny rano fisotro madio, dia asiana vahaolana kely phosphate sy deoxidizer mba hanatsarana ny fihoaram-pefy sy ny harafesina amin'ny rano. Ny amponga dia tsy maintsy mamoaka ampahany amin'ny ranon'ny boiler mba hifehezana ny totalin'ny ranon'ny boiler ao anaty amponga.
500kg singa famokarana hydrogène entona voajanahary
Rongteng famokarana hydrogen ho an'ny entona voajanahary
Ny dingan'ny famokarana hidrôzenina amin'ny entona voajanahary dia ahitana dingana efatra: ny fikarakarana entona famahanana, ny fiovan'ny entona voajanahary, ny fiovan'ny monoxide karbônina ary ny fanadiovana hydrogène.
Rongteng famokarana hydrogène miaraka amin'ny entona voajanahary na mpamokatra entona hydrogène
Ny entona voajanahary toy ny solika dia mifangaro amin'ny entona desorption adsorption swing, ary avy eo ny habetsaky ny entona entona ao amin'ny preheater entona solika dia amboarina araka ny mari-pana entona amin'ny fivoahan'ny lafaoro fanavaozana. Aorian'ny fanitsiana ny fikorianan'ny rivotra, ny entona solika dia miditra amin'ny fandoroana ambony mba handoroana mba hanomezana hafanana ho an'ny lafaoro fanavaozana.
Fitaovana famokarana hydrogène 500KG avy amin'ny entona voajanahary
Ny endri-javatra ankapobeny Ny endrika ankapoben'ny skid mounted dia manova ny fomba fametrahana mahazatra eo an-toerana. Amin'ny alàlan'ny fanodinana, ny famokarana, ny fantsona ary ny fikolokoloana ao amin'ny orinasa, ny fanaraha-maso ny famokarana ny fitaovana rehetra, ny fitiliana ny lesoka sy ny fitsapana ny tsindry ao amin'ny orinasa dia tanteraka tanteraka, izay mamaha ny risika amin'ny fanaraha-maso ny kalitao ateraky ny fananganana an-toerana an'ny mpampiasa, ary tena mahatratra ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny dingana manontolo. Ny vokatra rehetra dia napetraka ao amin'ny orinasa. Ny hevitra...
Namboarina 500KW hatramin'ny 8MW mpamokatra entona voajanahary sy genset entona avy amin'ny orinasa sinoa
Ny vondrona mpamokatra entona (generator standby ho an'ny entona voajanahary) dia manaiky ny famolavolana boaty fisarahana, ny boaty dia afaka mahafeno ny fiasan'ny toe-piainana maro samihafa, ary manana ny asan'ny porofo avy amin'ny orana, ny vovoka fasika, ny moka, ny fampihenana ny tabataba, sns. vata vata dia natao sy novokarina tamin'ny rafitra manokana sy ny fitaovana amin'ny fitoerana matanjaka.
Orinasa LNG mini amin'ny 1 hatramin'ny 2 MMSCFD
Mety amin'ny fampiasana fandriana entona kely, entona shale, entona mirehitra, metana, biogaz, ary lavadrano entona voajanahary lavitra. Izy ireo dia mila fitaovana fandoroana entona voajanahary tena skid. Manana tombony amin'ny fampiasam-bola kely, vidiny ambany, fametrahana mora, famindrana mora, fibodoana tany kely ary fanarenana haingana.
Mpanjifa orinasa madinika LNG dingana na orinasa liquefaction LNG
Ny dingan'ny liquefaction entona voajanahary dia ahitana pretreatment (fanadiovana) ny entona manta, liquefaction, refrigerant mivezivezy famatrarana, fitehirizana vokatra, Loading sy ny rafitra fanampiny, sns ny tena dingana dia ahitana ny fanadiovana ny entona manta sy ny liquefaction ny voadio entona.